Tsy mora ny Bloggin '! Na dia miaraka amin'ny Vox | Martech Zone
Tsy mora ny Bloggin '! Na dia miaraka amin'i Vox aza
Alatsinainy Desambra 11, 2006 Zoma, Oktobra 24, 2014 Douglas Karr
vaovao farany: Nikatona ny sehatra Vox tamin'ny 2010.
Raha ny vao tsy ela akory izay, dia mieritreritra be amin'ny fanomezana tahirin-kevitra bebe kokoa aho ary na dia ny firesahana ampahibemaso amin'ny bilaogy aza. Fa maninona Tsy mora ny bilaogera! Fantatry ny orinasa izany… ny fametrahana 'tenanao' amin'ny Internet dia mety ho tetika tsara na tsia. Ankoatra ny paikady sy ny atiny, dia ny teknolojia.
Tsy mora ny Bloggin.
Azo antoka, ireo bilaogera lehibe dia nahatonga azy ho tsotra. Manipy bilaogy iray izy ireo ary mivoaka miaraka amina dokambarotra an'arivony dolara. Manary vola ho azy ireo ny olona. Fa ahoana kosa ny an'i Mom & Pop izay te-hametraka bilaogy tsotra momba ny orinasany na ny fianakaviany? Web Analytics, fahefana, fanatsarana motera fikarohana, laharana, trackbacks, ping, post slugs, fanehoan-kevitra, valiny nomen'ny mpampiasa, sokajy, tagging, feeds, feed Analytics, famandrihana mailaka… ampy izay hahatonga ny olona rehetra hitsoaka!
Mora ho ahy izany satria efa herintaona no nanatrehako izany ary nanaparitahana ny singa rehetra amin'ny bilaogy. Azoko. Geek aho. Ny fialam-boliko, ny asako ary ny fitiavako.
Ilay zaza vaovao eny an-tsena dia Vox. Nahita pikantsary vitsivitsy an'ny Vox aho nanosika ny atiny (raki-peo, horonan-tsary na sary) hiditra ao amin'ilay lahatsoratra ary gaga tamin'ny fomba tsotra nataon'izy ireo. Saingy teo no nijanona mora.
Tsy misy latsaky ny 30 rohy ao amin'ny pejin'ny bilaogiko raha zavatra azo atao. Te-hampakatra sary ho an'ny bilaogy fotsiny aho ary hanakorontana ny sarin'ny bilaogy ho an'ny sarina profil. Raha hampiasa ny tenanao ianao ho toy ny fitaovana “mora” manaraka amin'ny fanaovana bilaogy, dia azonao antoka fa ho mora kokoa aminao ny hanamora azy. Tsy misy fomba mety hanosihako ny namako hamonjy ity fitaovana ity. Aleoko miresaka azy ireo WordPress or Bilaogera.
Angamba ny iray amin'ireo olana amin'ny Vox dia ny fitaoman'ireo bilaogera azy tamin'ny fanaovana bilaogy. Raha tena te hanao sehatra fitorahana bilaogy tsotra i SixApart dia tokony ho nitady olona mbola tsy nibilaogy mihitsy izy ireo. Tsy azoko antoka hoe inona ny tahan'ny fananganana zaza raha hiakatra amin'ny Vox, saingy miahiahy aho fa mahavariana izy ireo.
Tags: fitorahana bilaogyVOX
Tag bilaogy: Tsiambaratelo 5 momba ahy
adCenter ho an'ny Adsense… tsy mety izany
Dec 12, 2006 amin'ny 7: 47 AM
Mametraka hevitra tsara ianao Doug. Ny ho avy sy ny fitomboan'ny fitorahana bilaogy ary ny olona tonga ao amin'ny bilaoginao dia ireo olona "mahazatra". Ny olona sasany izay mety tsy mahalala akory ny dikan'ilay teny hoe mitoraka bilaogy ankehitriny.
Dec 25, 2006 ao amin'ny 10: PM PM
Nijery an'i Vox aho tamin'ny voalohany nanombohany koa ary tsy dia gaga tamin'izany. Manana rakotra fanala mahafinaritra izy, fa rehefa mandavaka lalina dia tsy mahafinaritra na tsotra ampiasaina. Mieritreritra aho fa azon'izy ireo atao ny mampiasa fihoarana amin'ny rafitra.